ငွေတာရီ added 22 new photos.
တစ်ခါတုန်းက အတန်းထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတည့်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင် (၈) နှစ်အရွယ်ကထဲက သူမဟာ ကျောင်းမှာ ပြောမရ ဆိုမရတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီး နေပြီ။
စာလဲမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စာမေးပွဲ တဘုန်းဘုန်းကျတဲ့ ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ပေါ့။
အတန်းထဲမှာဆို ဘယ်တော့မှ ငြိမ်ငြိမ်မထိုင်နေဘူး။ ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေတယ်လို့ အမြဲ ကောက်ချက်ချ ဆူခံထိလေ့ရှိတယ်။
Posted by ZP.LINTAN at 7:46 AM
Posted by ZP.LINTAN at 7:34 AM
သို့သော် ဤလွယ်ကူ၍ အရေးကြီးသော ကွင်းဆက်ကို လူတို့မေ့လျော့သည့်အတွက် ဆေးအာနိသင် ရသင့်သလောက်
မရသည့်အပြင် အစာမျိုပြွန်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
Posted by ZP.LINTAN at 7:23 AM
သုတဇုန် added2new photos.
ခေါင်းစဉ်ဖက်လိုက်တာနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ထူးဆန်းကောင်း ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်။ တကယ်အမှန်ပါပဲ Firefox အမှတ်အသား ထဲက အနီရောင်နဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးဟာ တကယ်မြေခွေး မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by ZP.LINTAN at 4:45 AM
MCA Thailand မှ
Posted by ZP.LINTAN at 9:16 AM
Posted by ZP.LINTAN at 11:09 AM